Ibhizinisi elinenzuzo liphupho labaningi. Futhi amathemba okuthuthukiswa abonakala ecacile. Kodwa kunezici eziningi ezingaphazamisa. Okokuqala, usomabhizinisi ubhekene nesidingo sokukhetha isiqondiso. Inketho enhle - ukuvulwa kwemoto. Ukuze uhlele konke, udinga imali, isikhathi nesisindo. Ngaphezu kwalokho, kufanele wenze uhlelo lwebhizinisi lokugeza imoto ngezibalo.
Inani lezimoto emigwaqweni likhula njalo. Futhi wonke umnikazi wemoto ubhekene nesimo esidingekayo sokugeza. Futhi ngenxa yalokhu, abantu abaningi baphendukela ochwepheshe. Ingabe ukugeza imoto kudala imali? Uhlelo lwebhizinisi kufanele lwenziwe kuphela emva kokuba uziqinisele ngenzuzo yombono. Phakathi naleso sikhathi, ehlobo, uthuli luhlala ezimotweni, ngesikhathi sokuwa, futhi ebusika bahlushwa usawoti womgwaqo. Ngakho-ke, ungaba nengeniso unyaka wonke. Ukugeza izandla yikhono lokusebenza kuze kube yimishini engu-6 ngehora. Futhi ukukhokhelwa okuvamile kwezinsizakalo ezinjalo kungama-ruble angu-300. Ukuhlanza okumanzi kwekhishi kubiza cishe ama-ruble angu-4,5 ayizinkulungwane. Ingeniso yakho yenyanga izoba okungenani $ 8,000. Uma ususa kulo izindleko zezidingo zobuchwepheshe, inkokhelo kanye nokuqashiswa, ngenxa yalokho, inzuzo enenzuzo izoba ngamadola ayizinkulungwane ezimbili. Ingabe ukugeza imoto kunenzuzo? Isu lebhizinisi liphendula ukuthi yebo.
Uma uzokwakha ukugeza imoto, kuzodingeka udale iphrojekthi. Kuyadingeka ukuze uthole imibhalo ezovumela ukwakhiwa kwesakhiwo. Kubaluleke kakhulu ukucabangela ngokucophelela indawo yehhovisi lakho. Indlela engcono - eduze kwemigwaqo endaweni enabantu abaningi. Kubalulekile ukuba uqale uqinisekise ukuthi kukhona abaqhudelana nabo. Vula ukugeza imoto ngaphandle kwemvume yeziphathimandla ezifanele ngeke kusebenze. Ngakho-ke, kufanele uthole imvume. Lokhu kuzodingeka kwenziwe uma uzokwakha iphrojekthi.
Ngaphandle kwemishini, ukugeza imoto ngeke kusebenze. Uhlelo lwebhizinisi kufanele luqukathe lolu lwazi. Kuzothatha imishini yokucindezela ephansi nephezulu. Uzohlinzeka amakhasimende umshini wokuwasha wokuqala ngokupuniza ngezinambuzane ezihlukahlukene, ezithambile ngamanzi ngaphansi kwengcindezi ephakeme ngokwanele. Khona-ke ukugeza kuyenziwa ngamanzi ashisayo atshisayo besebenzisa amabhulashi usebenzisa i-detergents. Ukuhlanza i-Glass kwenziwa ngaphansi kwengcindezi ephansi ngamanzi ahlaselwe phansi. Kudingeka futhi uthenge imishini yokuhlanza. Kuzodinga ukuxhuma uhlelo lokuhlanza imoto, ngokwezindinganiso zangasese nezesifo se-epidemiological.
Yini enye ebalulekile ukwazi uma ufuna ukuvulwa kwezimoto zakho kuvulwe? Uhlelo lwebhizinisi kufanele luqukethe ulwazi mayelana nokukhethwa kwabasebenzi. Kungcono ukunikela ngezinsizakalo zamahora angu-24, indlela kuphela ongathola ngayo inzuzo enkulu. Futhi ngenxa yalokhu kuzodingeka uqashe okungenani abantu abayisithupha nomqondisi oyedwa. Uma sikhuluma ngenkokhelo, ukhetho oluhle yiphesenti yomsebenzi owenziwe. Kuzodingeka futhi uhlele ibhodi lokunamathisela elihle, ukukhangisa kumaphephandaba naku-intanethi.
Omunye ukholelwa ukuthi inzuzo enkulu ingaletha ukugeza imoto ngokwesevisi. Uhlelo lwebhizinisi lubhalwe phansi ngokuhlukile.
Izindleko zokuhlela ibhizinisi elinjalo zizokhokha ezinyangeni ezingaba ngu-7. Uma wakha isakhiwo, khona-ke isikhathi sizokwelulela okungenani unyaka nonyaka.
Ukuhlela Inzuzo inzuzo amabhizinisi ngokusebenzisa imithombo angaphatheki
Indlela ukudweba brownie? Step by step Umhlahlandlela
Gymnastics ngoba umgogodla.
Yini igcwele ubuchopho contusion?
Cappings Polyurethane phansi - isixazululo yesimanje ngokokuhlobisa
Kuyini enamathela polymer? I polymeric enamathela metal